News – ပဒသော
ကုလားကို အဆောင်ခေါအိပ်တဲ့ မြန်မာမလေး
မြန်မာမိန်းကလေးအဆာင်က ကောင်မလေးတစ်ယာက်က ကုလားကို အိမ်ခေါ်အိမ်လို ဖြေရှင်းပေးရတယ်အမောမပြေသေး မွှားကပြန်လာပြီးမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေပြီးးမြန်မာမိန်းကလေးကကုလားနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးမိန်းကလေးအဆောင်ထိခေါအိပ်ခဲ့လို့ အဆောင်ရှိမိန်းကလေးအားလုံးကဆန့်ကျင်ပြီးထိုမိန်းကလေးကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် unicode မွနျမာမိနျးကလေးအဆာငျက ကောငျမလေးတဈယာကျက ကုလားကို အိမျချေါအိမျလို ဖွရှေငျးပေးရတယျအမောမပွသေေး မှားကပွနျလာပွီးမလေးရှားနိုငျငံမှာနပွေီးးမွနျမာမိနျးကလေးကကုလားနဲ့ခဈြကွိုကျပွီးမိနျးကလေးအဆောငျထိခေါအိပျခဲ့လို့ အဆောငျရှိမိနျးကလေးအားလုံးကဆနျ့ကငျြပွီးထိုမိနျးကလေးကိုမောငျးထုတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ
ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တော်တော်များများမှာ အပျိုလေးတွေက ဗီလိန်ဖြစ်နေတာ ကို အားလုံး လည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဘာကြောင့် အပျိုတစ်ယောက် က ရုပ်ရည် လည်း ရှိရက်သားနဲ့၊ ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ သိက္ခာအကျခံပြီး တွဲနေရလဲဆိုတာ အားလုံး သိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (၁) ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ယောက်ျားမှန်းသိနေလို့လူအများနဲ့
သိန်းပေါင်း(၆)သောင်းကျော် လှူဒါန်းပေမဲ့ နားကပ်တောင် မဝတ်တဲ့ မိန်းကလေး
နိုင်ငံတော်ရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးအခမ်းအနားကိုတက်ပြီး ကျပ်သိန်းပေါင်း၆၅၁၆၀ လာလှူသွားတဲ့သူနားမှာလဲ စိန်နားကပ်အပြူးကြီးမတွေ့ရသလို လည်ပင်းမှာလဲဧရာမရွှေဆွဲကြိုးအလေးကြီးမတွေ့ရပြန်ပါဘူး ။ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပညာကို ကမ္ဘာပတ်ပြီး တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာသင်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ထူးချွန်တဲ့ပညာရှင်တယောက်အဖြစ် ဆုတွေလည်း ရထားတဲ့သူကတော့ သမာအာဇီဝကျကျ ချမ်းသာလာတဲ့ ဘဏ်သူဌေးဦးအောင်ကိုဝင်း(ဆရာကျောင်း)ရဲ့သမီးရိုးသားတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ် ။သူမရဲ့နာမည်ကတော့ နန်းလောင်ခမ်းဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘောဇဘဏ်ရဲ့ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ကိုဝင်းရဲ့ သမီး(၃)သီးထဲကမှ သမီးကြီး ဖြစ်ပါတယ် ။သူ့ သမီးတွေထဲမှာ နန်းလိုင်ခမ်း
သုတစုံ | August 9, 2020
Online ဖြင့် အောင်စာရင်းကြည့်ရှုရာတွင် အင်တာနက်လိုင်းမရသော ဒေသများနှင့် လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး ခက်ခဲသောဒေသများအ တွက် အောင်စာရင်းထုတ်ပြန် ကြေညာမည့် (၉-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) တွင် အောင်စာရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းသည် များရှိပါက မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ Call Center အဖွဲ့ (၇) ဖွဲ့ဖြင့် လက်ခံဖြေကြား ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် – တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Online ဖွငျ့ အောငျစာရငျးကွညျ့ရှုရာတှငျ အငျတာနကျလိုငျးမရသော ဒသေမြားနှငျ့ လမျးပနျးဆကျ သှယျရေး ခကျခဲသောဒသေမြားအတှကျ အောငျစာရငျးထုတျပွနျ ကွညောမညျ့ (၉-၈-၂၀၂၀) ရကျနေ့ (တနင်ျဂနှနေေ့) တှငျ အောငျစာရငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ မရှငျးလငျးသညျမြားရှိပါက မေးမွနျးစုံစမျးနိုငျရနျ အောကျဖျောပွပါ Call Center အဖှဲ့ (၇) ဖှဲ့ဖွငျ့ လကျခံဖွကွေား ပေးသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။ ဒေါကျတာကြျောဝငျးစိုး ညှနျကွားရေးမှူး
၇၅ ခုနှစ်အရွယ် ဒီအမေအိုကြီးကို အနိုင်ရလိုဇော်နဲ့အရမ်းကြီး မတိုက်ခိုက်ကြပါနဲ့ဗျာ…..သူမပိုင်တဲ့ ကုမ္မဏီ ၊ သူမပိုင်တဲ့ ဟိုတယ်ဘယ်မှာမှ လက်ည်ိုးထိုးပြစရာမရှိဘူး…..(ရှိတဲ့ လူတွေက စပ်ကြတော့).သူ့မသား ၊ သူမမြေးတွေ လူတွင်ကျယ်လုပ်တာမျိုးနိုက်ကလပ်တွေမှာ သောင်းကျန်းတာမျိုးပြည်သူကို ပါးရိုတ်တာမျိုးလဲ မရှိဘူး…..(လုပ်တဲ့လူတွေ နာကြလော့)သူ့မအကြောင်း အားလုံးက အတင်းအဖျင်းပြောရလောက်အောင်အခြေအမြစ်မရှိတာတွေ သူမ မလုပ်ခဲ့ဘူး……သူ့ခမျာ အသက်လဲကြီးလှပြီဗျာ…..ပြည်သူကို က်ိုဗစ်ဆိုလဲ ကိုဗစ်မုိ့လို့အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးတယ်ထောက်ပံကြေးတွေလဲပေးမယ် အာ့ဒီနေ့ရာမှာ
သုတစုံ | August 8, 2020
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်စာရင်းကြည့်နိုင်ရန်ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ Link များကနေကြည့်ပါ။ ရန်ကုန်တိုင်း https://bit.ly/2C0VheD မန္တလေးတိုင်း https://bit.ly/30rH2sD ​နေပြည်တော် https://bit.ly/2BXLs0O ဧရာဝတီတိုင်း https://bit.ly/3a1uawC စစ်ကိုင်းတိုင်း https://bit.ly/2EWfweF မကွေးတိုင်း https://bit.ly/33scGIk ပဲခူးတိုင်း https://bit.ly/31m62AH တနင်္သာရီတိုင်းhttps://bit.ly/3keabPT ကချင်ပြည်နယ် https://bit.ly/3kdzAt0 ကယားပြည်နယ် https://bit.ly/31jwtHj ကရင်ပြည်နယ် https://bit.ly/2Xu32RO ချင်းပြည်နယ် https://bit.ly/2PnzTmT ရခိုင်ပြည်နယ်
ညောင်မြစ်တွေမှ ကျောင်းဆောင်ပုံစံ ရှင်သန်နေတဲ့ တန်ခိုးကြီးဆင်းတုတော်များ
ရသစုံ | August 5, 2020
ရှေးဟောင်း ဘုရားအများကြီး ရှိတဲ့နေရာတွေကို ဒေသခံတွေ လိုက်ပို့ကြလို့ စုံအောင် ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆင်းတုတော်တွေ အများကြီး ရှိတဲ့ ညောင်ပင် ဘုရားကတော့ ထူးခြားပါတယ်။ ရှေးရှေးတုန်းက ဘုရားကျောင်းဆောင် ပေါ် ကနေ ညောင်ပင် ကပ်ပေါက်ပြီး ညောင်မြစ်တွေက ဘုရားကျောင်းဆောင်ရဲ့ တိုင်တွေက တဆင့်မြေကြီး မှာ အမြစ်တွယ် ခဲ့ကြတဲ့သဘောပါ။ နှစ်တွေ ရာနဲ့ချီပြီးကြာတော့ ကျောင်းဆောင်က
ကံကောင်းချက်ဗျာ ထိုင်းဘတ်ငွေ (6)သန်းပေါက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဇနီးမောင်နှံ
သုတစုံ | August 2, 2020
ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားဇနီးမောင်နှံ 1-8-2020 ရက်​နေ့ထွက် ထိုင်းထီအမြင့်ဆုံးဆု ပထမဆုထိုင်းဘတ်ငွေ (6)သန်း ကံထူးရှင် ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ၊ လာမယ့်အပတ်မှာလည်း မြန်မာလုပ်သားကံထူးရှင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ…. ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ…..ရဲမင်း(AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့) unicode ထိုငျးရောကျမွနျမာလုပျသားဇနီးမောငျနှံ 1-8-2020 ရကျ​နထှေ့ကျ ထိုငျးထီအမွငျ့ဆုံးဆု ပထမဆုထိုငျးဘတျငှေ (6)သနျး ကံထူးရှငျ ဖွဈသှားခဲ့ပါပွီ၊ လာမယျ့အပတျမှာလညျး မွနျမာလုပျသားကံထူးရှငျမြားဖွဈနိုငျကွပါစေ…. ငွိမျးခမျြးကွပါစေ…..ရဲမငျး(AAC မဟာမိတျအဖှဲ့)
ထိုင်းဘုရင်ရဲ့၆၈ နှစ်မွေးနေ့မှာ မြန်မာပြည်သားဝင်းနဲ့ဇော် ရဲ့ ဝမ်းသာစရာသတင်း *အတိုင်းထက်အလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ် * (ပုံကိုထိုပီး ဖတ်ပါ )
ဘုရင်ဝချီရာလောင်ကွန်ရဲ့ သက်တော် ( ၆၈ )နှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အကျဉ်ထောင်းအသီးသီး၌ အကျဉ်းကျခံနေရသော အကျဉ်းသားများကို သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အညီလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့်အထူးလျှော့ရက်များကို ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ကပေးသနားခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ် ။ အကျဉ်သားအရေအတွက်ကိုတော့တရားဝင်မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး ၊ ဘာဘဲပြောပြော မြန်မာနိုင်ငံသား ဝင်းနဲ့ဇော်ကိုလည်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လေးများရခဲ့မယ်ဆိုလျှင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပါဘဲဗျာ ဘုရင်ကြီးကျေးဇူးကိုလည်းမမေ့ပါဘူး. unicode ဘုရငျဝခြီရာလောငျကှနျရဲ့သကျတျော ( ၆၈ )နှဈမှေးနအေ့ထိမျးအမှတျအဖွဈအကဉျြထောငျးအသီးသီး၌ အကဉျြးကခြံနရေသော အကဉျြးသားမြားကို သတျမှတျထားသောစညျးမဉျြးဥပဒနှေငျ့အညီလှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့နှငျ့ အထူးလြှော့ရကျမြားကို ဇူလိုငျလ